Ahoana ny fanokafana rakitra CBR - VidaBytes | LifeBytes
Ahoana ny fomba hanokafana rakitra CBR
Iris Gamen | 23/06/2022 20:00 | fampiharana
Ireo rakitra dizitaly izay hitantsika amin'ny sehatra an-tserasera samihafa dia azo ankafizina amin'ny alàlan'ny fitaovana samihafa amin'ny PDF, Word, JPG na fanitarana hafa izay mety ho sambany vao hitanao ary tsy azo sokafana amin'ny fampiharana sasany ihany. Androany dia hiresaka momba ny fomba hanokafana rakitra CBR isikaAraka ny efa fantatry ny maro aminareo, ireo dia rakitra misy sary samihafa azo jerena amin'ny fampiasana fampiharana manokana.
Ity karazana endrika rakitra ity dia mifandray indrindra amin'ny tontolon'ny tantara an-tsary., na dia hita amin'ny karazana rakitra hafa aza. Raha mpankafy tantara an-tsary ianao dia azo antoka fa naniry ny hankafy azy ireo mihoatra ny indray mandeha ianao, saingy tsy fantatrao ny fomba hanokafana an'io rakitra CBR io, dia hifarana izany noho ny fika izay homenay anao amin'ity famoahana ity.
1 Inona ny rakitra CBR?
2 Fandaharana hanokafana rakitra CBR amin'ny Windows
3 Fandaharana hanokafana rakitra CBR amin'ny Mac
3.1 Mpijery boky komik
4 Fampiharana hanokatra rakitra CBR amin'ny Android na IOS
Inona ny rakitra CBR?
Ireo rakitra CBR ireo dia mitovy amin'ny maro hafa izay ho hitantsika imbetsaka, ZIP na RAR, antontan-taratasy maromaro voaporitra. Ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe amin'ny rakitra CBR dia ireo mirakitra tantara feno filaharan-tsary. Apetraka amin'ny filaharana manokana ireo sary ireo, ka rehefa mankafy azy ireo dia atao amin'ny fomba milamina.
Ny rakitra CBR, araka ny efa nambarantsika tany am-piandohan'ny famoahana, dia ampiasaina hitahirizana tantara an-tsary nomerika. Izy io dia endrika, izay tsy mampiseho tsy fahombiazana rehefa decompressing miaraka amin'ny fampiharana manokana ho azy toy ny WinZip.
Ny mpamorona an'io endrika rakitra io dia i David Ayton, izay tamin'ny taona 90 dia namolavola rindrambaiko ahafahana mijery tantara an-tsary tsy misy olana, ity rindrambaiko ity dia CDisplay. Ny fandefasana ity programa vaovao ity dia revolisiona lehibe ho an'ny tontolon'ny fijerena sary misy hatramin'izao.
Noho ny CDisplay, ny filaharan'ny sary dia hita teo amin'ny efijery miaraka amin'ny maranitra lehibe.z, kalitao sy antsipiriany, manaja foana ny baiko voamarika rehefa mamaky ny aventure izay notantaraina teo anelanelan'ny pejy.
Ny voalohany “CB”, mahazatra amin'ity karazana rakitra ity, dia avy amin'ny Comic Book, endrika noforonina manokana ahafahana manokatra izany amin'ny alàlan'ny rindrambaiko CDisplay. Raha amin'ny fotoanan'ny Misintona ireo rakitra ireo ianao dia mijery ny taratasy farany, izany dia manondro ny karazana fanerena efa nampiasaina, izany hoe raha amin'ny alalan'ny fichier RAR ilay izy dia .cbr no miseho, fa raha ZIP ilay izy dia .cbz no miseho ilay rakitra.
Raha mbola vonona ny hanohy na hanomboka hankafy ny tantaran'ny tantara an-tsary tianao indrindra ianao, Izahay dia mitondra anao ny fantenana ny sasany amin'ireo programa tsara indrindra alaina sy hanokafana ity karazana rakitra ity amin'ny fomba tsotra sy tsy misy hadisoana, ao amin'ny fizarana manaraka. Tsy ho an'ireo mpampiasa Windows ihany no ho hitantsika, fa ho an'ireo izay mampiasa Mac ihany koa, ankoatra ny fampiharana finday ho an'ny Android sy IOS.
Fandaharana hanokafana rakitra CBR amin'ny Windows
Raha mpampiasa Windows ianao ary te hahafantatra sy hianatra ny fomba hanokafana rakitra CBR dia azonao atao ny mahazo iray amin'ireto programa manaraka ireto izay holazainay.
Tsy afaka milaza an'ity programa ity ao amin'ny lisitray izahay ary misaotra ny mpamorona azy noho ny hevitra hanatanterahana ity karazana endrika ity sy izay rehetra manodidina azy. CDdisplay, Izy io dia programa tena tsotra ho an'ny solosaina, saingy amin'ny fotoana iray ihany dia tena mahomby Ary tsy adino fa maimaim-poana tanteraka.
Fandaharana efa niasa manokana ary anisan’ny ankafizin’ireo mpankafy tantara an-tsary. Manolotra traikefa mamaky teny mahafinaritra izy io, afaka mamaky endrika samihafa toy ny PDF, CBR, CBZ, ankoatry ny hafa. Ampidirina ao anatin'ny segondra vitsy ny tantara an-tsary nefa tsy manary kalitao sy manaja ny antsipiriany rehetra.
Iray amin'ireo programa lehibe, amin'ny resaka famakiana rakitra CBR voalaza fa mamaky tantara an-tsary amin'ny solosaina. Miaraka amin'ity rindrambaiko ity, tsy vitan'ny hoe mankafy ireo tantara voalaza eo anelanelan'ny pejin'ny tantara an-tsary ianao, fa afaka manova votoaty nomerika ihany koa.
Ny teboka tsara ho an'ireo izay saro-piaro amin'ny fizarana ny rakitra, dia izany Gonvisor dia manome anao ny fahafahana miaro ny antontan-taratasinao amin'ny alàlan'ny tenimiafina. Safidy manome lanja ity programa ity.
Fandaharana hanokafana rakitra CBR amin'ny Mac
Amin'ity toerana misy anao ity dia hahita programa samihafa ahafahan'ny mpampiasa Mac manokatra rakitra CBR tsy misy fahasarotana.
Mpijery boky komik
Miaraka amin'ity programa voalohany entinay ato amin'ity lisitra ity, dia tsy ho afaka hanokatra rakitra CBR ihany ianao, fa koa rakitra CBZ sy PDF. Amin'ny alalan'ny interface tsotra dia ho afaka hivezivezy haingana amin'ny atiny rehetra atolony anao ianao. Manamora izany noho ny thumbnails atolotra anao.
Ny iray amin'ireo tena mahasarika azy dia izany manohana ny famakiana sy ny fijerena pejy roa. Miaraka amin'ity safidy fampirantiana ity, ny tanjona dia ny maka tahaka ny famakiana tantara an-tsary ara-batana, toy ny hoe mamadika ireo pejy avy miankavanana miankavia amin'ny rantsantananao ianao. Azonao atao ny manana an'ity programa ity amin'ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny App Store amin'ny 5.49 euros.
Tahaka ny amin'ireo programa maromaro noresahinay, ny DrawnStrip Reader dia mifanaraka amin'ny karazana endrika hafa ankoatra ny CBR, toy ny; CBZ, CB7. CBT, ZIP, RAR, sns. Ity rindrambaiko resahina ity dia natao ho an'ny efijery retina, manome anao ny fahafahana manova ireo rakitra ireo amin'ny endrika hafa.
Izy io koa dia ahafahanao manala ireo sary avy amin'ny rakitra tianao indrindra, ary afaka mizara azy ireo. Ny teboka iray tena tsara dia ny manome anao famirapiratana sy fanitsiana mifanohitra mba hampifanaraka azy amin'ny safidinao. Afaka mahazo DrawnStrip Reader ianao amin'ny fividianana azy ao amin'ny Apple Store amin'ny vidiny 4.49 euros.
Fampiharana hanokatra rakitra CBR amin'ny Android na IOS
Amin'ity fizarana farany ity dia hahita andiana rindranasa voatondro hankafy an'io karazana rakitra io amin'ny fitaovana finday isika nefa tsy misy karazana fampidinana na fampisehoana diso.
Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho hitanao eny an-tsena ho an'ny fitaovana Android, izay ahafahanao mankafy ny rakitra CBR sy CBZ. Tsy mijanona ao fotsiny izy io fa mifanaraka amin'ny karazana endrika hafa toy ny JPG, GIF, PNG na BMP.
Izy io dia fampiharana maimaim-poana tanteraka, saingy misy votoaty dokam-barotra, izay azonao esorina raha mividy app mitambatra ianao. Mariho fa tsy vitan'ny hoe mamela anao decompress mivantana ny rakitra CBR sy CBZ ianao, fa afaka miditra amin'ny sary ihany koa ianao.
Ho an'ireo mpampiasa IOS, ity no entinay aminao fampiharana tena tsotra izay ny tena tanjona dia ny hamela anao hamaky ny rakitra CBR sy CBZ. Miaraka amin'izany ianao dia afaka miditra amin'ny rakitra voatahiry amin'ny tranokala nomerika samihafa toa ny Dropbox, Drive, OneDrive, sns.
Ny fampidinana ireo rakitra voafantina avy amin'ny tranokala rehetra dia atao mivantana amin'ny findainao. Toy ny tamin'ny tranga teo aloha, dia fampiharana maimaim-poana tanteraka hita ao amin'ny fivarotana Apple.
Hatreto, ny lisitray miaraka amin'ny tolo-kevitra samihafa momba ny programa sy ny fampiharana azo alaina mba hahafahanao miroboka amin'ireo tantara mampientam-po amin'ny tontolon'ny tantara an-tsary. Tsy maintsy fantarinao ihany, izay programa na fampiharana no aseho araka ny fitaovana tianao hanombohana mamaky, misintona, mametraka ary manomboka mankafy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » fampiharana » Ahoana ny fomba hanokafana rakitra CBR
Fandaharana hanovana sary ho video